दयाहाङलाई अभिनय गराउन चुनौती छ – नवीन सुब्बा «
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहीबार १५:०४
अभिनेता दयाहाङ राईले निर्देशक नवीन सुब्बाले आफ्नो अभिनयलाई लिएर गर्ने गरेको टिप्पणीलाई आफूले मार्गदर्शनका रूपमा लिएको बताएका छन् ।
मौखिक रूपमा होस् अथवा सञ्चारमाध्यममार्फत लिखित रूपमा निर्देशक सुब्बाबाट आएको टिप्पणीलाई आफूले आ’लोचनाभन्दा पनि सुझावका रूपमा लिने गरेको दयाहाङ बताउँछन् ।“आफूले कोसिस गर्दा पनि चाहेजस्तो अभिनय गर्न नसकेको थिइनँ ।
मैले कहाँनेर ग’ल्ती गरिरहेको छु र अब आउने दिनमा कसरी काम गर्दा हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु,” चलचित्र ‘गाउँ आएको बाटो’ निर्माणको घोषणा कार्यक्रममा दयाहाङले भने, “काम गरेर मैले यदि रिजल्ट निकाल्न सकिनँ भने पनि मेरो लागि सिकाइ हुनेछ ।”
कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्देशक सुब्बाको विचार र आफूले काम गर्ने तरिकाबारे प्रि–प्रोडक्सनमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
नवीन सुब्बा चलचित्रको क्षेत्रमा आफ्नो अभिभावक भएको बताउँदै दयाहाङ भन्छन्, “नवीन दाइ र छिरिङ रितार शेर्पाले त्यो समय त्यसखालका चलचित्र नबनाउनु भएको भए अभिनेता भएर म आज चलचित्रमा काम गरिरहेको हुने थिइनँ ।”
नवीनले ‘नुमाफुङ’ र छिरिङले ‘मु’कुण्डो’लगायत फरक धारका चलचित्र बनाएका थिए । उनीहरूको चलचित्र हेरेर नै आफ्नो समुदाय र आफूजस्ता मान्छेको पनि कथा हुने रहेछ भनेर अभिनय गर्ने रहर पूरा गर्न रंगकर्ममा प्रवेश गरेको दयाहाङ सुनाउँछन् ।
अभिनयमा स’मस्या रहेको सन्दर्भमा सुब्बाले गर्ने निर्देशन तथा आफूमा रहेको अनुभवका आधारमा सुधारको प्रयास गर्ने उनले स्पष्ट पारे । नवीनसँग काम गर्न पाउनु आफ्ना लागि अवसर र चु’नौती दुवै भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, आफूले अवसरकै रूपमा लिएको उनले बताए ।
एउटा मान्छेले सोच्ने तरिका अक्सर एउटै हुने भएकाले धेरै चलचित्रमा एकै प्रकारको अभिनय र चरित्र देखिएको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै दयाहाङ भन्छन्, “हरेक व्यक्तिमा सीमितता हुन्छ । मसँग जति क्षमता हुन्छ त्यति नै काम गर्ने हो ।
आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्नेछु । केही गरेको पनि छु, यसअघिका काममा । इमानदार प्रयास गर्ने हो, हेरौँ कति गर्न सकिन्छ ।” नवीन सुब्बा र आफ्नो विचार र धारणालाई मिलाएर काम गर्दा केही राम्रो काम हुने उनको विश्वास छ ।
व्यक्ति एउटै भएका कारण उसको इ’मोसन पनि एउटै र एकै प्रकारको हुने तर त्यसभन्दा फरक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने घोत्लिनुपर्नेमा निर्देशक सुब्बाको जोड छ । आफूले नेपालका अभिनयका गुरुहरूसँग पटक–पटक अभिनयमा अझ धेरै कलात्मक काम कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्ने गरेको उनले सुनाए ।
“विदेशमा क्षणभङ्गु’रता भन्छ । त्यही समयमा हुने इ’मोसन भनेर भनिन्छ, यसरी पनि काम भइरहेको छ । नेपालमा त अहिले विदेशमा पढेर आएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ ।
इ’मोसन, चरित्र, फिजिकल मेमोरीलगायत थुप्रै अभिनयको मेथोडबाट काम गरिरहेका छन्,” विदेशमा एउटै कलाकारबाट फरक–फरक चरित्रमा धेरै राम्रो अभिनय हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, हाम्रो एक्टिङका गुरुहरूले कुन त्यस्तो अभिनयको मेथोड विकास गर्नुभयो, जसले अभिनेताको लिमिटेसनलाई चिर्न मद्दत गर्‍यो ।”
दयाहाङलाई अभिनेताले आफूमा रहेको एउटा इ’मोसन वा मेथोडबाहेक अरू इ’मोसन अथवा मेथोड ल्याउने कुनै तरिका वा बाटो छैन भनेर आफूले झक्झक्याउने गरेको नवीनले प्रष्ट पारे । “अहिले मैले दयाहाङसँग कुरा गर्दा स्क्रिप्ट एनलाइसिस गर्दा अपडेटेड छ भन्ने कुरा आयो ।
बाहिर योभन्दा अपडेट स्क्रिप्टमा काम हुन थालिसकेको छ,” उनी भन्छन्, “क्यारेक्टर निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्छ । दयाले अभिनय गरेको मेथोड ख’राब होइन, तर त्योभन्दा बेटर मेथोड आइसक्यो, जसमा अपडेट हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो ।”
नेपालको अभिनयको स’मस्या भनेको आफ्नै मेथोड विकास गर्न नसक्नु रहेको नवीनको तर्क छ । “टेलिचलचित्र दलनमा खोलामा मान्छे फ्याँ’क्ने सिन थियो । यत्रो जो’खिम उठाउनु हुँदैन भनेर हामीले मान्छेको डेमो बनाएर फ्याँक्ने भयौँ ।
तर, त्यो यति धेरै आर्टिफिसियल देखियो कि दर्शकले पनि चिट गरेको थाहा पाउने भए । त्यसपछि हामीले पुलबाट मान्छे नै खोलामा फ्याँक्नुपर्ने भयो । त्यो बेला दयाले भन्यो– दाइ, मलाई नै पुलबाट खोलामा फ्याँक्दिनुस् ।
हामीले खोलामा पराल, फर्म राखेर जोखिम कम गरेर उसलाई फाल्यौँ,” दयाहाङले अभिनयको आफ्नै मेथोड विकास गर्न नसके पनि उनमा डेडिकेसन भने रहेको नवीन स्मरण गर्छन्, “तर, पुलको बारबाट मान्छे हु’त्याउँदा केही परबाट हु’त्तिँदो रहेछ ।
दया हामीले राखेका पराल र फर्मभन्दा पर भुइँमा गएर बज्रिन पुगे । त्यो जो’खिमबाट बचेर आएको दयामा मैले अभिनयप्रति रहेको डेडिकेसन भने देखेको छु । डेडिकेसन भएको व्यक्तिले काम गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”
उनमा रहेको स्टोरियोटाइप हटाउन आफूले प्रयास गर्ने नीवनको प्रतिबद्धता छ । यसका लागि आफूले प्रयास पनि सुरु गरिसकेको उनले बताए ।
“म जसको अभिनयको आ’लोचना गर्थेँ, उसैसँग काम गरिरहेको छु । दयालाई अभिनय गराउन निश्चय पनि चु’नौती छ । यसलाई ओभरकम गराउन मैले एकजना साथीलाई दयाले काम गर्दा के–के काम गर्दो रहेछ सबै अध्ययन गर भनेँ,” निर्देशक नवीन भन्छन्, “दयाको रिपिटेसन के हो ?
पोस्चर र जेस्चर के हो ?,डाइलग डेलिभरी कसरी गर्छ ? हिँड्दाखेरी कसरी हिँड्छ ? भनेर अध्ययन गरेको मोटो फाइल मसँग आइपुगेको छ । दयासँग बसेर हामी कसरी काम गर्ने टुंगोमा पुग्छौँ ।”
निर्देशक सुब्बा थिएटर आर्टिस्टले नेपाली चलचित्रको अभिनय बि’गारे भन्दै आ’लोचना गर्दै आएका मेकर हुन् । उनले अहिले आफ्नो नयाँ चलचित्रमा आफूले आ’लोचना गरेका पात्रलाई नै मुख्य चरित्रमा लिएर काम गर्न लागेका छन् ।